Retinol - okubizwa ngokuthi ehlukile uvithamini A, kuyasiza hhayi nje ngobe kutawutfutfukisa buka, njengoba kwakucatshangwa phambilini, kodwa nezalo isikhumba. Lokhu izakhiwo ngokuyisimangaliso ososayensi retinol baye bafunda muva.
Retinol - vitamin fat-encibilikayo ukuthi itholakala izinombolo omkhulu kunayo yonke imikhiqizo yezilwane. Iningi retinol e isibindi nenhlanzi amafutha, okuyinto ungathandi izingane. Retinol manje ayisekho ukuthatha spoonfuls fat, neziphuzo amaphilisi ukuthi ngisho izingane zidluliselwa kahle.
Retinol isikhumba sayo saqale esetshenziswa njengendlela yokwelapha for induna (induna). With ukusetshenziswa retinol isikhumba ozuza ukubukeka enempilo futhi ukuqubuka encishisiwe kakhulu. Ngemva ukusetshenziswa eside retinol, ososayensi bathola ukuthi kubambezela inqubo yokuguga - isikhumba sishintsha kancane kakhulu. Leli qiniso bangeniswa inkonzo izinkampani muhle baqala ukusebenzisa retinol cishe kuyo yonke indawo. Uhlobo oluvame kakhulu i - retinoic acid retinol palmitate. Ikakhulukazi eziningi kubo amashampu anti-dandruff, buso kanye okhilimu for ebusweni.
Retinol ebusweni ewusizo ngoba lingena singene izingqimba we epidermis, owenza usebenze izingxenye zemvelo ezifana collagen futhi mithambo ine-elastin, okuyinto banesibopho ukubukeka kwesikhumba. Ngenxa yalesi ukuchayeka, isikhumba kuba nokunwebeka.
Ngaphezu kwalokho retinol amabhlogo imithelela metalloproteinases elulaza collagen futhi mithambo ine-elastin. Ngakho, ngenxa imibimbi retinol. Ukuze bagcine isenzo retinol, kufanele usebenzise phakathi nezinyanga ezintathu.
Retinol isikhumba udinga ukuvuselelwa yayo. Uma isikhumba has micro-imifantu, ukusha, ukuthi retinol kusiza ezingeni lendawo ukuqinisa umzimba ozivikela. retinol Ngenxa esebenzayo endaweni sokuphulukiswa, isikhumba kancane engavikelekile ukuze izinqubo zokuwohloka.
Naphezu yayo izimfanelo ezinhle, retinol isikhumba Ungase futhi nemiphumela engemihle. Kwezinye abantu kungabangela ukoma ngokweqile, uyaxebuka kanye ukucasuka, kodwa lokhu ihlobene kakhulu nge ukungabekezelelani ngabanye. imihlola Okufanayo zithathwa kakhulu ngokushesha sebenzisa amafutha okuthambisa.
Ongaqondile imiphumela engemihle retinol kubhekwa ukuzwela ngokweqile elangeni. amaseli Young ukuthi akhiwa ziyashesha kakhulu UV ukukhanya kuka elidala. Ngakho ngaphambi kokuba uya ukuthamela ilanga, kufanele usebenzise umuthi ongakuvikela ngokuphelele elangeni.
Endaweni ehlukile, kufanele ishiwo ukusetshenziswa retinol ketshezi izimonyo. Yiqiniso, imali ezinengqondo ukusebenzisa okhilimu kanye retinol akuyona kuphela kungenzeka, kodwa kudingekile. Ukuze wenze lokhu, ngaphambi kokuthenga noma yimuphi umkhiqizo yezimonyo udinga ukufunda ngokucophelela ukwakheka emaphaketheni kanye avivinye ku endololwaneni. Uma isikhumba asihlali iminonjana ukusha noma ukucasuka, ithuluzi kufanelekile futhi ingasetshenziswa. Ngokuvamile, ngaphezu amakha zihlanganisa retinol nezinye izithako ukuthi ngcono ukusebenza kwawo. Ngakho, lichaza ekwakheni okhilimu eziningi zihlanganisa itiye isihlahla akhiphe soy, ezisawolintshi akhiphe. Lezi okhilimu akuzona kuyazuzisa isikhumba kuphela, kodwa futhi abe nephunga elimnandi.
Retinol Skin ngeshwa aziyikwandiswa senzo. Ngemva kwezinyanga eziyisithupha, ithonya lakhe buthaka kakhulu, ngakho-ke kuyadingeka ukuba wandise isicelo retinol. Ukuze uthole umphumela esiphezulu retinol, odinga ukukwazi ezinye izici kwesicelo yayo:
retinol ezidabula ukukhanya, ne retinol ke izindlela kumele igcwele esitsheni omnyama;
Retinol awukwazi ukubekezelela angaphandle "endaweni" - akudingekile ukusebenzisa ezinye izindlela, bese retinol, bayazuza kuso ngeke;
Kwezinye izimo, isikhumba kungase ukuwohloka - isicelo kufanele kuqhutshwe lokuhlushwa nsuku okuthuthukayo;
kungcono ukusebenzisa okhilimu kanye retinol ebusuku.
Ukusebenzisa lezi amathiphu alula, ungakwazi ukwenza ngcono isimo isikhumba sabo ngokusebenzisa retinol.
Baphi Maldives? Indawo engcono ukuze uhlale
Umama ngokwesivumelwano: lokho kudingeka, yini imithetho ezilandelwayo inkontileka
Iziphuzo Popular. Airan. Izinzuzo kanye efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka